ममी म डाक्टर भएँ भनेर फोन गरेकी छोरी नेपाल आउँदा स्व. भईसकिछ, सपना अधुरै (भिडियो सहित) — SuchanaKendra.Com
ममी म डाक्टर भएँ भनेर फोन गरेकी छोरी नेपाल आउँदा स्व. भईसकिछ, सपना अधुरै (भिडियो सहित)
काठमाडौं, । यूएस बंगला बिमान दुर्घटना हुँदा २२ नेपाली सहित ४९ जनाको ज्यान गएको छ भने २२ जना घाईते भएका छन् । घाईते मध्ये ११ नेपाली रहेको र अधिकांशको अवस्था चिन्ताजनक छ । मृत्यु हुने २२ नेपाली मध्ये ११ जना बंगलादेशमा डाक्टर पढ्न गएका बिद्यार्थी रहेको थाहा हुन आएको छ ।